एकदिने आँखा शिविर सम्पन्न – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७७, २४ फाल्गुन सोमबार २२:३४
धनकुटा । एक दिने अएक सय ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेवाः मिसाः दबु, धनकुटाको आयोजनामा एक दिने आँखा परिक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ । सो शिविर त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयका फरक क्षमता भएका विद्यार्थी तथा त्यस अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको गरिएको दबुका अध्यक्ष सुजता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल नेत्रज्योती संघ र डा. रामप्रसाद पोखरेल आँखा अस्पतालको सहयोगमा सञ्चालित शिविरको प्रमुख अतिथि नेत्रज्योती संघका सभापति रोशेष श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए । उनीहरुको आँखा परिक्षण अस्पतालका डा. इशा श्रेष्ठले गरेका थिए । सो अवसरमा औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको थियो ।
सो अवसरमा श्रेष्ठले फरक क्षमताका विद्यार्थीहरुको आँखा परिक्षण गर्ने कार्य गरेर नेवाः मिसाः दवुले प्रशसंनीय कार्य गरेको बताए । उनले संघले कोहि पनि व्यक्ति आँखाको ज्योती गुमाउन नपरोस् भनि क्रियाशील रहेको बताए ।
सो अवसरमा धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ५ का महिला सदस्य सीता प्रधान, रेणु श्रेष्ठ, डे केयर सेन्टरका अध्यक्ष रुना श्रेष्ठ, विद्यालयका सहप्राध्यापक राम श्रेष्ठ, संघका पुरेन्द्रलाल श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
दवुका अध्यक्ष सुजता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत मनतव्य लीजा श्रेष्ठले गरेका थिए । यस्तै शिविरका वारेमा दवुका रेणु श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।